Europe ezinika Ngexesha The Spring Season | Gcina A Isitimela
ekhaya > Travel Europe > Europe ezinika Ngexesha The Spring Season
Ixesha lokuFunda: 4 imizuzu(Wagqibela ukuhlaziywa nge-: 04/12/2019)
Europe Iindawo ezinika umdla e Epreli kuthetha eYurophu ezinika Ngexesha The Spring Time! Since most of Europe is so far from the equator, uninzi odumileyo imizi kusekho kancinane kubanda ku April (Kubeke ngokuvumelana). kunjalo, Europe Iindawo ezinika umdla e Epreli kuba yenye iinyanga ilungileyo zonyaka atyelele kakhulu kwaye kakhulu imizi ethandwa Apha. amazinga ishushu ngokwaneleyo ukuba mnandi indawo ukhamba, kodwa ubukhulu isihlwele zincinane kakhulu kunokuba uya kubona ukususela ngoMeyi noJuni. Nalu uluhlu lwethu kweendawo ukuba bahambele uhambo lwakho eYurophu ngexesha entwasahlobo!
Lo mfanekiso sathathwa eYurophu ezinika Ngexesha The Spring, picture ngokuthula inala emizaneni amanzi eziblowu bamise malunga eentaba ye Alps, apho snow eliswenyiweyo iincopho benza umzobo kakhulu ukuba ingane Borromeo Islands; bebambisa Como, apho iintaba gxwa amanzi anzongonzongo kunye elihle iilali banamathele kumathambeka. Ezi iintlobo leKrismesi uhlobo abakhuthaze ukuba abhale umbongo okanye ngokuzenzekelayo phinda ibe inja kwindawo ezantsi. Yinto nje kangaka ngokumangalisayo seluxolweni!
Bahambele ndawo ngo Epreli, Spring njengengxenye uhambo Insight Guides ingane Italian Lakes to stay ahead of the crowds.
EMilan ukuya Lake Como Uqeqesha
ETurin ku Lake Como Uqeqesha
WasePadua ku Lake Como Uqeqesha
EVenice ku Lake Como Uqeqesha
Europe ezinika Ebudeni The Spring e Barcelona / Speyin
Bhiyozela ekuqaleni Spring ndize ndikhwele uloliwe ku Barcelona. Akuyi kuthabatha kakhulu ukuyithanda kulo mzi Spanish kunye nabantu Spanish, abasoloko khumbula ukuba nelokuphumla ziphumle imihla – emva ngokukhawuleza emva kwexesha lesidlo sasemini, ngelixa wayesaziphumlele abamhlophe esimhlophe, ukudla paella esimnandi, yaye ukuphuza sangria fresh.
Ulele kule ndawo nase-, ngqo kunxweme mpuma esikwiMeditera Spain, Barcelona lo mzi yesibini ngobukhulu Speyin, kwaye enye edumileyo oya kuyo ukuba abahambi eYurophu ezinika Ngexesha The Spring. Barcelona kuyinto crossover umdla ubuncwane emangalisayo ezindala zokwakha kunye noyilo mihla. Ukuba fan enkulu Gaudi bokwakha, eze apha ukuze ubone linomtsalane Sagrada Família, Casa Batllo, no Güell Park. Barcelona lidla unyaka wonke othe, kwaye ungatyelela le abakhenkethi friendly isixeko nangaliphi na ixesha lonyaka.
in Bruges / Bheljiyam
Mhlawumbi uyazi ukuba Bruges, Bheljiyam, libizwa “broozh,” kodwa abaninzi, kunye amaqhawe “in Bruges” Imuvi, neze. Bona Dublin hit abantu, wamthumela khona ucamba iiveki ezimbini emva kokuba hit ehamba kakubi kakhulu. Enye i hothead oselula obona akukho sizathu sokuba naphi na kodwa Dublin; enye, abadala, gentler, ukwazi ngakumbi, uthenga incwadi yesikhokelo kunye imemezela: “Bruges lo mzi kakuhle walondoloza aphakathi Belgium!”
Ngoko kubonakala kunjalo impela. Ukuba movie angenzanga lutho okunye, ngayo esiphefumlelweyo emininzi umnqweno engxamisekileyo ukutyelela Bruges.
wasebenzisa kuyinto ezimbini enye ezizodwa unyaka wonke! Ulele phakathi France ne Spain, isixeko esincinane eyaziwa kakuhle elinamandla imizi emibini bazise, egcina elidumile ibhiya kunye chocolate. Ihamba ne Paris, Prague, yaye Budapest, le yenye yezona romantic imizi e Europe ngokupheleleyo imisele kunye nezindlu ezindala aphakathi.
Europe ezinika Ebudeni The Spring e Cologne / Jemani
lo 2,000 na unyaka isixeko ubudala ekwintshona Jemani kwaye ummandla omkhulu hub yenkcubeko. Kunye icawa ephakathi kwaye imibono umfula omangalisayo, Cologne kuba nenkanuko kwindawo efanele. Ngokukodwa abo bafuna ukuzifaka inkcubeko entsha amava ngendlela entsha ngoxa babehamba eYurophu. Donot awulibale ikhamera! Cologne yi isixeko sivulekile ephangaleleyo. Oku mhlawumbi hayi nje sihle look yokuqala njengezinye imizi, kodwa xa uhamba, uya kubona ukuba yenye yezixeko amnandi eJamani yaye ngokuqinisekileyo kuluhlu lwethu Europe ezinika Ngexesha The Spring.
the Altstadt (endala) has some very nice buildings, leyo balala ilungelo kuMlambo iRhine. Just next to it is the Cologne Cathedral, indawo zamagugu UNESCO. Kubalulekile kokwenyuka phezulu enye ezinde ezimbini.
Cologne kumayelana emoyeni and its people. Abantu e Cologne uthando emzini wabo. They have their own dialect and quite a few umculo bands nabavumayo malunga isixeko kula nezendawo. Ixesha ukuxukuxa phezulu ekufundeni ulwimi olutsha!
Frankfurt ku Cologne Uqeqesha
EBrussels kwi Cologne Uqeqesha
Vienna ku Cologne Uqeqesha
Hanover ku Cologne Uqeqesha
Ingaba ulunde ntoni? Kukho inala iiholide bank ukuba ungenza ugqithisayo, aye eYurophu ezinika Ngexesha The Spring. Gcina A Isitimela kwakhona kwenza kube super lula babhukishe itikiti uloliwe kuyo nayiphi na kwezi ndawo, ngokukhawuleza kwamandla!
Ingaba ufuna kuzakulungisa post yethu blog kwi sayithi yakho, ungakwazi noba uthathe iifoto zethu kunye itekisi asinike nje ngetyala ngekhonkco kule post blog, okanye cofa apha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Feurope-travel-during-spring%2F - (Skrolela phantsi kancinci ukuze ubone Code lungisela) Jemani
Ukuba ufuna ukuba nobubele kubasebenzisi bakho, wena ndiyabakhokela ngqo amaphepha ukufuna yethu. Kule ikhonkco, uya kufumana iindlela zethu kakhulu ethandwa uloliwe – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Ngaphakathi une link yethu ngenxa IsiNgesi emakhasini, kodwa nathi sibe https://www.saveatrain.com/nl_routes_sitemap.xml, kwaye bangatshintsha / nl ukuba / ru okanye / ngayo kwiilwimi ezininzi.
Uloliwe eSweden, Travel Europe